Suurtagalka Apple Keynote ee diyaar u ah Oktoobar 2016 | Waxaan ka socdaa mac
Horaan usheegnay markaan aragnay wararka yar ee ay kusoo bandhigeen muhiimada bisha Sebtember. Aniguna wali waxaan hayaa hangool ka iPhone 7 iyo 7 oo lagu daray, AirPods iyo Apple Watch-ka cajiibka ah ee Taxanaha 2aad. Waxaanan dhahay cajaa'ib, haa, sababtoo ah waan iibsaday waana inaan ku qanciyaa naftayda inay ahayd iib aad u guuleysatay. Runta ayaa ah inaan ku faraxsanahay, horey ayaan kuugu sheegay waayo-aragnimadayda ku jirta Apple Store. Muhiimadu waxay tahay in manzanita la qaniinay ay waxyaabo kaga tagtay bakhaarka ay qaadan doonto ka hor intaanu iibsiga kirismaska ​​imaan, haa, waxay noqon cusub Macbook Pro. Kaligood ma imaan lahaayeen haddii ay muxaadara ka dhigaan, taas oo macnaheedu noqon lahaa warar dheeraad ah iyo isbeddelada kujira buugga.
Hoos ka ogow wararka xanta cusub ee ku saabsan dhacdo suurtagal ah bisha Oktoobar. Intaas waxaa sii dheer, waxaan ka wada hadli doonnaa waxa ay soo bandhigi karaan. IPhone 7 dhab ahaan maahan, sababtoo ah horeyba way sameeyeen.
1 Oktoobar, bisha labaad ee muhiimka ah ee Apple
2 Jiilka soo socda ee Macbook Faa'iidooyinka ayaa halkan yaal
Oktoobar, bisha labaad ee muhiimka ah ee Apple
Dad badan oo adeegsadayaal ah, macaamiil iyo taageerayaal astaanta ah ayaa u maleynayay inaysan jiri doonin dhacdooyin intaa ka badan illaa Maarso ama Abriil, laakiin waxaa jiri doona. Warka ku saabsan qodobka suurtagalka ah waxaa bixiyay falanqeeye wanaagsan oo Applepost ah, wuxuuna sii wadaa faahfaahinta. Kahor intaanan u dhaqaaqin inaan faallo ka bixiyo xogta ku saabsan furaha suurtagalka ah, waxaan rabaa inaan sharaxo sababta dhacdo ay lagama maarmaan u tahay taas oo ay ku soo bandhigayaan alaabooyin cusub oo leh naqshado wax laga beddelay. Apple waxay leedahay iibin iib ah, labadaba iPhone 6s iyo noocyada kale ee alaabada. Macbook, iMac, iwm Xitaa iPad-yada oo si weyn u kordhin lahaa iibka ma aysan sameyn. Waa la iibiyey in ka badan sidii hore, laakiin way ka sii badnaan kari lahaayeen.
Sidaa darteed, Apple waxay u baahan tahay inay kordhiso iibinta iphoneka cusub ee 7 iyo 7 oo lagu daray, marka lagu daro Apple Watch Series 2 iyo qalabkeeda badan. Laga soo bilaabo kiisaska iyo suumanka ilaa dhagaha maqalka iyo AirPods caan ah. Haddii aysan jirin iPads ama Macs cusub, iibku ma kordhin doono dhamaadka rubuc maaliyadeedkan iyo kan xiga. Waxa aanan rabin inay sameeyaan waa inay sii hayaan naqshadda hadda jirta sanad kale, gaar ahaan barnaamijka loo yaqaan 'Macbook Pro', kuwaas oo noqonaya kuwo culus oo xoog badan laakiin leh qaab duug ah ama muuqaal ah. Tani waxay noqon laheyd halyeeyga ugu weyn ee muhiimka ah ee bisha soo socota, Macbook Pro.
Jiilka soo socda ee Macbook Faa'iidooyinka ayaa halkan yaal
Apple waxay ku qanacsan tahay in mustaqbalka kumbuyuutarrada shaqsiyadeed iyo suuqa ay ku jiraan iPads. Fikraddaas oo ah laptop-ka super-ka ah iyo kiniiniga, laakiin aan isku dayin inuu noqdo isku-dhaf ama shey wareersan oo la beddeli karo. Waan ku raacsanahay aragtidaas, laakiin waa inaan qiraa in wax waliba ay leeyihiin xaddidnaantiisa. Shaqooyin badan oo shaqo ayaa kuxiran hadba qaybaha aadan awood u laheyn inaad ku sameyso iPad-ka, macquul ahaan, tan waxaad ugu baahan tahay nidaamyo desktop ah. MacOS waa nidaamka heer sare heerkan marka loo eego hadda wuxuu yeelan doonaa qalab casri ah oo cusbooneysiin leh naqshad wanaagsan iyo warar aad u xiiso badan.
Khafiifsan, xoog badan, batteri badan. Trackpad waxyar ka weyn si loogu fududaado isticmaalka iyo kumbuyuutar cusub oo cusub. Laga yaabee dhanka taabashada iyo dhumucda inay la mid tahay tii hore ama ka badan oo la mid ah Macbook-ga xadidan, wali ma ogin, laakiin waxaan ognahay faahfaahin kale oo muhiim ah. Macbook-ka cusub ee cusub ayaa imaan kara muxaadaradan oo leh shaashad shaashad ah ama shaashadda 'OLED' ee korka kumbuyuutarka dusheeda, taabo oo ay la socdaan shaqooyin degdeg ah iyo ficillo nooc kasta leh. Waxyaabaha la mid ah Menu ama xayndaabka kumbuyuutarka. Shaashad labaad oo khafiif ah oo khafiif ah si aan u habeyn karno furayaasha shaqada.
Iftiin, cod, makarafoon ama Siri, soojiraha, shaqooyinka laxiriira dib uqabashada feylasha badan ama muusigga. Cayaar, hakad, horay, gadaal ... Aqoonsiga suurtagalka ah ee suurtogalka ah ee lagu dhisay muuqaalka sida muunad ugu horeysa ee waxa aan ku arki lahayn iphone-ka 2017 iwm. Midabyo cusub, dhammaadka tufaaxa dambe ee dambe iyo hoos u dhaca suurtagalka ah ee Macbook-ga xadidan. Ka saarida Macbook Air-ka liiska buugga iyo dekedo badan oo nooca USB-C ah iyo USB dhaqameed ka yar. Tani waa waxa laga filan karo nuxurka.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Apple » Noticias » Suurtagalka suurtagalka ah ee Apple ayaa diyaar u ah Oktoobar 2016
Plex wuxuu bilaabayaa "Plex Cloud" oo u oggolaanaya marin meel fog laga doono meel kasta